Madaafiic loogu dabaal degayay madaxweynaha cusub ee Galmudug oo dad shacab ah ku dhibaateysay Waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland - Caasimada Online
Home Warar Madaafiic loogu dabaal degayay madaxweynaha cusub ee Galmudug oo dad shacab ah...
Madaafiic loogu dabaal degayay madaxweynaha cusub ee Galmudug oo dad shacab ah ku dhibaateysay Waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland
Gaalkacyo (Caasimadda Online) – Waxaa ilaa hadda deegaanada Galmudug si weyn uga socdo dabaal dagyo kala duwan oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maanta aqlabiyad weyn uga soo baxay doorashadii ka dhacday Cadaado.
Madaxwyenaha Galmudug asal ahaan wuxuu kasoo jeedaan Gaalkacyo, waxaana halkaas doorashada kadib laga maqlayay daryanka madaafiic lagu soo dhaqeynayay madaxweyne Axmed Ducaale.
Warar Soo baxaya ayaa sheegaya in Madaafiic la sheegay in loogu Dabaaldagayay madaxweynaha cusub ee Galmudug ay dad ku dhaawaceen Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Maamulka Puntland.
Weli Faah Faahn rasmi ah lagama haayo tirada dadka dhaawacyada ay kasoo gaareen madaafiicda laga tuuray Koonfurta Gaalkacyo ee Galmudug ee dadka shacabka ah ku dhaawacday Waqooyiga Gaalkacyo ee Maamulka Puntland.
Weli kama aysan hadlin arrintaan Maamulada Galmudug iyo Puntland dhibaatada ka dhalatay u dabaal dagista madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Maamulada Galmudug iyo Puntland wali kama hadlin madaafiicdaan maanta Koonfurta Gaalkacyo laga tuuray ee dadka shacabka ah ay dhaawacyada kasoo gaareen , sidoo kale saraakiisha amniga ee labada maamul wali kama aysan hadlin .
Dhowaan ayay aheyd markii Risaas la sheegay in laga soo tuuray dhanka Waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland uu wiil kubad ciyarayay ku geeriyooday sidoo kalana qof dumar ah ay ku dhaawacantay kuwaas oo ku sugnaa Koonfurta magaalada Gaalkacyo ee qeyta Galmudug.